Yekupedzisira Nongedzo kuGoogle Docs - WebSetNet
Iyo Yekupedzisira Yekutungamira kuGoogle Docs
19 Min Verenga
Chese chinhu chinogunzirwa neGoogle chinoratidzika kutendeukira kune goridhe.
Kwete chete iyo brand yakabatsira online mabhizimusi kuunza mabhiriyoni emadhora kuburikidza neinjini yekutsvaga, asi zvakare - uye inoenderera mberi - kubazi kunze nekugadzira zvimwe zvigadzirwa.
Imwe yezvigadzirwa izvi Google Docs, yemahara izwi-processor uye neimwe nzira kuMicrosoft Word iyo inobvumira chero munhu kuti zvive nyore kugadzira uye kurongedza yavo pachavo gwaro rinogovaniswa.
Google Docs ndeye behemoth. Chishandiso chakawanda-kumeso uye chakawanda-chinoshanda; zviri nyore kuremerwa kana uchidzidzira nzira yako kutenderera. Ndosaka isu takanyora iri bhuku - kukudzidzisa iwe nezve mashandisiro eGoogle Docs kugadzira zvinotyisa zvemukati uye kubatana nechikwata chako. Isu zvakare tinopinza mune mamwe Mazano uye mazano izvo zvichaita kuti kuita uku kuve nyore.
Chii chinonzi Google Docs?
Hapana kurodha pasi. Hapana kubhadhara. Hapana chaiyo browser kana komputa inodiwa. Kune chero chigadzirwa kunze uko kwemazuva ano chiri nyore kuwana uye kushandisa?
Mhinduro ndeyekuti hongu.
Google Docs ndeye akasununguka zvachose, muchinjiko-chikuva (syncs magwaro kumafoni, mahwendefa, uye desktops) izwi processor iyo inoshanda zvese online uye zvisiri pamhepo. Zvese zvaunoda iGoogle account, yakafanana account yakasununguka yaunoshandisa yako G Suite kana Gmail.
Iyo-yakagadzirirwa-gore chishandiso inosanganisira yakachena dhizaini uye yakasarudzika maficha evashandisi, sekugona kwekushanda, kugovana, uye kubatana kubva chero kupi. Iyi puratifomu inongoerekana yaenzanisa uye inochengetedza basa rako rese, kuti urege kana kunetseka nekumanikidza Save.
Nezvinyorwa izvi, zviri pachena kuti nei mamirioni evashandisi vachisarudza Google Docs kupfuura mamwe ma processors ezwi.
Google Docs vs. Microsoft Shoko
Ngatisakanganwe nezveMicrosoft Word, zvisinei. Microsoft Shoko raive rakatenderedza kupfuura Google Docs uye rinoramba richinyanya kufarirwa nhasi. Mamirioni evashandisi vamwe uye makambani achiri kubhadhara mari hombe yekushandisa Shoko. Saka, Google Docs neIzwi zvinoenzanisa sei?
Kune imwe, Google Docs ndeye mahara neGoogle account. Microsoft Shoko rinofanira kutengwa sechikamu che Microsoft Office package, inosanganisira zvimwe zvigadzirwa zveMicrosoft zvakaita sePowerPoint, Excel, uye Outlook.
Pamba uye Bhizinesi mapakeji anotenderera kubva pamadhora mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemashanu ((mushandisi wega pamusha) kusvika pamadhora zana nemashanu (kune mumwe munhu ari pabasa) kwenhengo yegore. Google Docs, kune rumwe rutivi, inokutendera kuti ushande pamwe nehuwandu hwevanhu, chero kupi zvako munyika, mahara.
Chimwe chinhu chinosiyanisa ndechekuti, neGoogle Docs, rako rese basa rakachengetwa kuCloud. Izvi zvinoreva kuti haucharasikirwe nemapeji ako makumi maviri. (Whew!) NeMicrosoft Word, zvinyorwa zvako zvinogara pakombuta yako; vaunoshanda navo havagone kuzviongorora kunze kwekunge uchizochengeta uye nekugovana navo kuburikidza neemail kana zvimwe.
Kunyangwe iwe uchisarudza Google Docs kana Microsoft Word, hazvisi zvakaoma kuwiriranisa maviri acho. Iwe unogona kugadzira Google Doc nyowani nekungorodha iro riripo reIzwi faira. Heano maitiro.
Vhura yako Google Drive uye tinya Nyowani.
pombi Faira kurodha kuti uwane mafaera akachengetedzwa pakombuta yako.
Sarudza yako faira reShoko kubva pakombuta yako uye tinya Open. Izvi zvichaisa yako faira kuGoogle yako Dhivha. Kamwe uploaded, pinda-pinda iyo kuvhura. Kamwe kuvhura, tinya Google Docs kubva kumenyu yekudonhedza kumusoro.
Voila! Ndiwo mashandisiro aunoita Shoko reDVD kune reGoogle Docs faira. Iye zvino, ngatimbochera zvakadzama mashandisiro atingaite Google Docs.
Kubatirana muGoogle Docs
Iko kune yakawanda yeti mazano uye manomano ayo vashandisi vanogona kutora mukana ivo pavanenge vachishandisa Google Docs - kungave kushanda semunhu wega kana nechikwata.
Google Docs inobvumira vanhu vakawanda kushanda, kubatana, uye kugadzirisa mukati megwaro rimwe munguva chaiyo-kuburikidza kuburikidza chero webhusaiti. Heano maitiro.
Kugovera Yako Google Doc
Vanhu pachavo vanogona kugovera gwaro ravo nevanhu vazhinji sezvavanoda, pamwe nekugadzirisa zvitenderwa zvavo kudzikisira izvo zvavanogona kuita.
Kuti utange kugovera, tinya faira > mugove.
Kune nzira ina dzekugovana - iyo yaunosarudza ndiyo yako zvachose kusarudza.
1. Gadzira chinogovaniswa chinongedzo.
Nzira iri nyore yekugovera peji reGoogle Docs ndeyekugadzira chinogona kugovaniswa chinongedzo. Izvi zvinobvumidza chero munhu kuti atendese yakasarudzika URL uye kutarisa gwaro rako.
Mushure mekutora mugove, tapira iyo Wana Mugove Unogovaniswa bhatani pakona yepamusoro kurudyi.
Sarudza mvumo yekugovana kwegwaro rako.
Mushure mekutsanangura mvumo, pinda Copy link.
Iyo URL inozotengeswa kune yako clipboard yekuti utumire kune chero munhu anoda kuona gwaro.
2. Govera kuburikidza email kero.
Iwe zvakare une sarudzo yekugovana gwaro rako nekero yeemail. Izvi zvinotumira kokero ku mubhokisi remunhu iyeye, uye wedzera iro gwaro kuGoogle account yavo.
Kuti uite izvi, dzokera kubhokisi rekugovera.
Isa email kero yemunhu iwe waungade kugovera gwaro rako uye sarudza sarudzo kubva pasi-pasi yekugadzirisa mvumo yavo.
Kana iwe ukawedzera chinyorwa pakukoka uku, chinoratidzwa mune yeemaimendi kukoka.
3. Sarudza yepamusoro yekugovera sarudzo.
Dzokera kumashure kubhokisi rako rekugovera uye warova enderera.
Pano, iwe unogona kuona ese ekugadza magadzirirwo - kusanganisira ani anokwanisa kuwana gwaro rako, mvumo yavo yemvumo, uye sarudzo yekukoka vanhu vazhinji kana kubvisa vamwe.
4. Gadzira gwaro rako rinogona kurongedzwa nemunhu.
Unoda kupa chero munhu mvumo yekugadzirisa zviri mukati megwaro rako? Hit faira > mugove kuti uwane chinako chinogovaniswa.
Mune iyo inodonhedza menyu inoratidzwa, tinya Zvimwe ...
Mushure meizvozvo, sarudza On - Chero ani ane chinongedzo uye gadza mvumo mune yepasi pasi-pasi menyu.
Sezvo sarudzo iyi ichinyatsojekesa, munhu wese ane URL yako yakasarudzika achakwanisa kuchinja, kugadzirisa, uye kudzima gwaro rako… saka chenjera nezvekuti uri kugoverana naani.
Uchishandisa Google Docs Shortcut Keys
Pane huwandu hwemakiyi mapfupi ekukubatsira kuwedzera gohwo rako uchishanda muGoogle Docs. Wongorora chati inotevera kuti udzidze mamwe akakurumbira nzira pfupi.
zviito mac mapfupi pc mapfupi
mufananidzo C + c Ctrl + c
namatidza V + v Ctrl + v
vendu ⌘ + x Ctrl + x
Namatira pasina mafomati + Shift + v Ctrl + Shift + v
Dzokorora ⌘ + z Ctrl + z
Redo ⌘ + Shift + z Ctrl + Shift + z
Pinza / pepeta linked K + k Ctrl + k
Vhura chinongedzo Sarudzo + Pinda Alt + Pinda
Ratidza akajairika keyboard mapfupi ⌘ + / Ctrl + /
Save (Google Drive inozvishandira kuDrive) S + s Ctrl + s
dhinda ⌘ + p Ctrl + p
Open + O Ctrl + o
wana F + f Ctrl + f
Pinza peji kuputsa ⌘ + Pinda Ctrl + Pinda
Viga mamenyu (compact mode) Ctrl + Shift + f Ctrl + Shift + f
Kuti uwane runyorwa rwakazara rweMac, PC, Android, iPhone, uye iPad mapfupi makiyi, tarisa izvi peji.
Kugadzira uye Kunyora muGoogle Docs
Ndeapi maGoogle Docs maficha anokubatsira iwe uye timu yako kugadzira magwaro ane simba, zvisinei nenzvimbo yako? Heano mamwe maitiro aungaedza.
Bhonasi yekushandisa Google Docs ndeyekuti iwe unokwanisa kugadzirisa, kuchengetedza, uye kugadzira magwaro kuburikidza newebhu yako yewebhu kunyangwe kana usina kubatana neiyo Indaneti. Izvi zvinogona kuuya zvinobatsira kana muchida kuti muite rimwe basa muchifamba. Iko kuchinja kwaunoita iwe kuchiri kuchengetwa uye kuchabvumirana paunodzokera online.
Asi, ichi hachisi chinhu chinongoitika. Iwe unofanirwa kuseta-up offline NO kubatana muakaunti yako.
Kuti uite izvi, shanyira iyo Google Docs peji reimba uye uwane mabhatani emenyu kuruboshwe-kuruboshwe.
Wobva wadzvanya Settings.
A pop-up bhokisi rinobva razoonekwa pane yako skrini. Kumisa kuronga kunze kwenyika, shandura offline NO bhatani kuOn. (Izvi zvinofanirwa kushandura bhatani bhuruu, pane grey.)
Bhurawuza rako rinobva rachinjira kukuchinja kwekunze uye uchaona chiratidzo chinotevera kana uchigadzirisa gwaro rako pasina internet.
Tekinoroji yezwi indasitiri inokura, uye Google yave iri pamberi penzira iyi. Iwe unogona kumhanyisa maitiro ako ekunyora nekushandisa typing yezwi muGoogle Docs.
Kuti ushandise chimiro, tanga nekutarisa zvigadziriso zvako kuti uone kuti maikorofoni yako inoshanda.
Wobva musoro kuenda Tools > Kutyora Izwi. Iwe uchaona chiratidzo chemakrofoni.
Dzvanya uye tanga kutaura. Google ichashandura mazwi ako ataurwa kuita mavara, iwe aunoona achionekwa pane peji.
With the Google Docs app, vashandisi vanogona kupfuurira kugadzirisa, kugovana, kubatana mune chaiyo-nguva, kuwedzera mifananidzo, uye kugadzira zvemukati zvese vachiri pa-kuenda.
Iyo yemahara app inoshanda kunze kwenyika kamwe pawabatidza iyo marongero - nenzira imwechete yawakaita palaptop yako kana desktop - uye inongochengetedza basa rako kuCloud.
Wakambove uchinyora nezvenyaya uye wakamira kufunga, "Wow, ini ndinogona kushandisa zano kana maviri pamaitiro ekuvandudza chidimbu changu."
Google Docs yakakufukidza.
Iyo Yekuongorora chimiro - chakawanikwa nekudzvanya Tools > pasura - Google Docs ichaongorora izvo zvaunopa uye anoratidza ruzivo urwo iwe rwaunogona kuwedzera kune chako chidimbu.
Aya mazano anogona kusanganisira ruzivo iwe rwaungangodaro wakakanganwa, mifananidzo yekuvandudza chidimbu chako, kana kutsvaga kunogoneka kwaungasanganisira kudzosera pfungwa dzako nezvamunoreva.
Kugadzira Gwaro Rako muGoogle Docs
Google Docs inokupa iwe simba rekugadzira gwaro rinoshanda kwauri uye izvo iwe zvauri kugadzira. Kunyangwe iri maitiro epeji, mifananidzo, kana nhamba dzepeji, aya matipi anozokubatsira kuti utore gwaro rako chero nzira yaunoda.
Shanduko yekutarisa peji
Kuwedzera chinyorwa bhokisi
Kuwedzera nhamba dzepeji
Kugadzira indent inorembera
Kugadzira tafura yezvinyorwa
Kana iwe uri kutsvaga kushandisa zvakanyanya nzvimbo isina chinhu mune yako gwaro kana fometa rako gwaro rekudhinda, ungangoda kuchinja marama.
Usati waita izvi, iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti mutongi anoonekwa pamusoro pegwaro rako.
Kungoti musoro kuna maonero > Ratidza Mutongi.
Iwe unofanirwa kuona mutongi pasi pazasi rekufomora bara mugwaro rako.
Wadaro, kuti uchinje marinda epeji rako, tsvaga bhatani diki rebhuruu kuruboshwe-rwemubati uye rira bhatani kuti uchinje maruboshwe ako.
Kuti uchinje marinji ako orudyi muGoogle Docs, dzokorora maitiro aya uchishandisa bhatani bhatani kurudyi kwemutongi wako.
Kana iwe uchida madanho akasimba mugwaro rako, tinya faira > Kuisa Peji.
Iwe unozoona iyo inotevera pop-up bhokisi kwaunogona kuchinja margins.
Kana iwe uchida maawa akafanana mugwaro rega iwe raunogadzira, chengetedza nguva uye rova Isa seChina. Izvi zvinongoerekana zvoteedzera yako margin kuseta-kumusoro kune ese matsva magwaro.
Shanduko Yepagemendi Kuita Landscape
Kutsvaga kuchinja kutaridzika kwegwaro rako? Musoro kuenda faira > Kuisa Peji.
Zvadaro, sarudza Mamiriro pasi Orientation.
Kana iwe uchida kuti ese ako magwaro ave nemafungiro akafanana, pinda Isa seChina.
Kuwedzera Runyoro Bhokisi
Mavara mabhokisi ndiwo sarudzo yakanaka kana iwe uri kutsvaga kuwedzera chimwe chinhu chekuona kune rako gwaro. Ivo vanokutendera kuti uise mamwe mavara chero kupi zvako pane peji rako pasina kushandura chimiro chegwaro rako riripo.
MuGoogle Docs, mabhokisi ezvinyorwa anoiswa sezviratidzo. Unogona kuisa imwe nekudzvanya Insert > Drawing.
Izvi zvichazarura iyo Drawing chimiro. Tevere, pinda Runyorwa Bhokisi.
Dhirowa chikumbaridzo chako munzvimbo yekudhirowa kuti ugadzire bhokisi rinokodzera zvaunoda
Kana bhokisi rako rakagadzirwa, inguva yekuisa yako mavara.
Iwe unogona kushandura font, ruvara, uye nekuenderana kwemavara mubhokisi rako nekushandisa bara rekutsvaira pawindow-pop.
Unofara neako mavara bhokisi? Hit Sevha & Vhara kuiisa mune yako gwaro.
Kubva pano, bata rako bhokisi semufananidzo. Sarudza iyo chifananidzo kuchinja chinja kana kutamisa bhokisi rakatenderedza gwaro rako kuti rive rakanyatsoiswa.
Kuwedzera Peji Nhamba
Nhamba dzepamapeji dzinoita kuti gwaro rako rive nyore kufamba uye kubvumira kurongeka kuri nani kana rakadhindwa - unodzivisa kuzvibvunza wega, "Ino peji ino inoenda here ... kana uko?"
Wedzera nhamba dzepeji kune rako gwaro nekudzvanya Insert > Header > Peji Nhamba. Wobva wasarudza sarudzo yesarudzo yako.
Kugadzira Hanging Indent
Hanging indents indents iyo inochinja otomatiki chikamu chendima pasina kukanganisa chimiro chakashandiswa kumwe kunhu peji rako.
Kuti uwedzere indent inorembera muGoogle Docs, ita shuwa kuti mutongi wako anoonekwa nekumanikidza maonero > Ratidza Mutongi.
Wadaro, dzokera kugwaro rako guru uye simbisa iwo mavara iwe aunoda kurodha.
Wedzera chiyereko cherenga nekutarisa mubati pamusoro pegwaro rako uye kutsvedza miseve yebhuruu kune yako zvirevo.
Tsvedza museve kuruboshwe kuruboshwe rworuboshwe indent, uye museve kurudyi kurudyi kuchinja indent kurudyi.
Kuti uwedzere mufananidzo kune gwaro rako, ingoisa chikwangwani chako chero kwaunoda kuisa mufananidzo.
Dhinda kumusoro kumusoro peji nekudzvanya Insert > mufananidzo.
Sarudza iyo nzvimbo yemufananidzo - pane dzakawanda sarudzo dzinosanganisira komputa yako, dandemutande, Google Drive, kana ne URL.
Sarudza mufananidzo wako, baya Open, uye voila! Mufananidzo wako unofanirwa kuoneka.
Kuti uwane zvimwe pane izvi maitiro, tarisa izvi peji.
Kugadzira tafura Yezviri
Kana iwe urikunyora mharidzo kana whitepaper, tafura yezvinyorwa inzira huru yekuratidzira chikamu chimwe nechimwe chauri kugadzira uye iyo peji renhamba iyo inogona kuwanikwa pairi.
Iwe unogona kuisa tafura yezvinyorwa muGoogle Doc yako nekuona kuti misoro midiki yese yakarongwa netepi yemusoro. Kuti uite izvi, simbisa kamusoro kako wobva wadzvanya tepi yakakodzera mubara rako rekuumba.
Seiyo kutonga kwese kwemugunwe, iyo Heading 1 tag inofanirwa kunge iri yako huru musoro. Kutungamira ma tag maviri anofanirwa kunge ari musoro wenyaya, uye Kutungamira magi matatu anofanirwa kunge ari zvikamu pasi pechitsama.
Iye zvino wagadzirira kugadzira tafura yezviri mukati. Bata chishoko chako chaunoda kuti chiise uye tinya Insert > Zviri mukati kusarudza sarudzo zvichienderana nezvaunoda.
Kugadzirisa Gwaro Rako muGoogle Docs
Google Docs inopa akasiyana siyana ekugadzirisa ekuona kuti basa rako rinosvika kuzere kugona.
Kutsvaga mazwi kuverenga
Kumhanya kuperetera cheki
Kana iwe uri kushanda nemumwe munhu pane gwaro rako, unogona kuvabvunza kuti vatevedze shanduko yavo uye edits. Izvi zvichakuratidza ndiani akagadzira, pavaigadzira izvo shanduro, uye izvo zvinyorwa zvaive pamberi pekugadziriswa kwavo.
Unogona kutevedzera shanduko muGoogle Docs nekuchinja Kugadzirisa to Kupa zano kumusoro wekona kurudyi rwe peji.
Zvino, kana mumwe munhu achinge agadzira gwaro rako, chero shanduko dzinoratidza mune imwe ruvara, nebhokisi riri kurudyi-kurudyi kuratidza zita ravo, mufananidzo, uye kugadzirisa zvinyorwa.
Unogona kuongorora mabhaisikopu shanduko uye kubvuma kana kuramba sezvo zvinodiwa.
NeGoogle Docs, iwe nechikwata chako munogona kusiyira mhinduro mune chero gwaro kuti rimwe nerimwe uone. Izvi zvinowanzoshandiswa sezviyeuchidzo zvekudzoka kuchikamu chakati, kusiya zano rakadzama rekudzokorora, kana kuwedzera ma URL kune mamwe masosi nemifananidzo yereferenzi.
Kuti uite izvi simbisa izwi, chirevo, kana ndima yaunoda kutaura nezvayo uye dzvanya iyo Add Comment bhatani (iro bhokisi rezvinyorwa nerinosanganisira chiratidzo mukati).
Iwe unobva unogona kunyora chirevo - kana kuisa URL - mubhokisi rekutaura. Dzvanya komenda kana wagadzirira kutumira bhokisi rako.
Kuti ugadzirise ruzivo uri mubhokisi, tinya madontho matatu kurudyi uye sarudza pepeta. Iwe unogona zvakare kupeta makomendi pasi pemhinduro yekutanga nekunyora muBhokisi reKupindura.
Kuti ubvise bhokisi rekutaura iwe unogona kana kuridzima kana kugadzirisa mhinduro. Dzvanya matatu matatu kurudyi uye sarudza Kudzima kudzima bhokisi. Dzvanya Sarudza kumusoro kurudyi kwebhokisi kana nyaya yagadziriswa uye iwe hausisiri kuda chirevo.
Kana iwe uchitsvaga rumwe ruzivo rwakadzama mukuwedzera uye kugadzirisa mhinduro muGoogle Docs, tarisa ichi peji.
Kutsvaga Shoko Chiverengero
Wakambotambura here uchinyora pepa, chirevo, kana Blog romukova nekuda kwekuverenga izwi kunodiwa kuti wanga uchiedza kusvika sei?
Kunyangwe kusvika kuverenga kunodiwa izwi kungasave kuri nyore nguva dzose, Google Docs inoita kuti kuverenga kuve nyore.
Paunenge uchinge uri mugwaro rako, tinya Tools > Shoko Count. (Iwe unogona zvakare kushandisa iyo pfupi pfupi ⌘ + Shift + c.)
Google ichabva yaratidza huwandu hwemazwi (pamwe nehuwandu hwehuwandu hwemapeji, mavara, uye mavara kusasanzvimbo nzvimbo).
Kuti uverenge mazwi ari mukati meimwe mutsara, ndima, kana peji, simbisa iwo mavara iwe aunoda kuisa uye uteedzere nhanho dzakafanana pamusoro.
Kumhanya Spell Tarisa
Hazvina kujairika kunyange kwevanyori vanyanzvi kuita dzimwe nguva kuperetera kukanganisa. Google Docs inogona kubatsira vese vanyori nedambudziko iri.
Mhanya wongororo yekutarisa kuti uwane uye gadzirisa chero zvikanganiso zvingave zvaunenge wakanganisa. Funga nezvazvo sewe wega kuverenga kuverenga kana mupepeti.
Kuti umhanye cheki yekuongorora muGoogle Docs, tinya Tools > Kunyora > Cheki cheki.
Google Docs inozobva yaongorora gwaro rako rose kumashoko akakumirwa uye zvikanganiso zvegrama. Iwe unozopihwa sarudzo yekugamuchira kana kufuratira zano raGoogle.
Kana iwe ukaona kuti iwe unogara uchishandisa izwi risingazivikanwe neGoogle, unogona kumuwedzera muduramazwi rako. Izvi zvinodzivirira Google Docs kubva pakuratidzira izwi mune ramangwana rekutarisa ekutarisa.
MuGoogle Docs iwe unogona kuwedzera kukunda nekujekesa iwo mavara iwe aunoda kurovera uye kubaya urongwa > Strikethrough.
Uchishandisa Google Docs Wedzera-Ons
Iwe unogona kuwedzera matatu-bato maturusi, kana kuwedzera-ons, kune ako magwaro. Aya ma-add-e ane akasiyana maitiro ekukubatsira iwe kuvandudza basa rako munzira dzakasiyana siyana.
Unogona kuwana aya ekuwedzera nekudzvanya Wedzera-ons > Wana zvekuwedzera…
Heano mashoma akakurumbira ekuwedzera-iwe aungawana anobatsira.
Kunyora gwaro rinoda kutsigira data? Isa Google Chengeta kubhurawuza rako kuti uunganidze manotsi, zvidzidzo zvemakesi, uye mareferensi auri kuronga kuratidza. Zvadaro, shandisa iyo yekuwedzera kuvadhonzera mukati painenge ichidikanwa. Iwe unogona zvakare kugadzirisa zvinyorwa zvawakachengetedza neGoogle Gcina.
Zviripo muchibvumirano chakakosha, asi izvo zvinogona kuve zvakashata kana uchinge uchishandisa mafonti akasarudzika. The Extensis Mafonti kuwedzera-on imports zviuru zvemafonti kubva ku Google fonts raibhurari mune gwaro rako kuti uwedzere chidimbu chako chekunaka.
Kunyora chibvumirano, chibvumirano, kana chero chero mapepa anoda siginecha? The HelloSign kuwedzera-kuchakubatsira iwe kuunganidza emagetsi masiginecha mune nyore uye chengetedzo nzira.
Unoda mushanduri? Isa iyo turikira wedzera-kushandura kushandura zviri mukati mako kune mumwe mutauro.
The Lucidchart kuwedzera-paunokutendera iwe kuti uwedzere akasiyana madhiramu kune yako gwaro iri nyore kugadzira uye kuronga. Yakakwana kune chero munhu anoshanda nedata kana kutsvaga nzira inonakidza yekuratidza ruzivo.
Chirongwa cheMutauro inoita kuti kuverenga kuve nyore mumitauro inopfuura makumi maviri. Hauzofaniri kushamisika nezve chiperengo chako kana girama zvakare. Ichi chekuwedzera chinobata kukanganisa uye kukanganisa zvisinei nemutauro.
EasyBib iri otomatiki bhaibheri jenareta ine anopfuura 7,000+ maitiro esarudzo, kusanganisira MLA, APA, uye, Harvard-maitiro.
Uchishandisa Google Sheets uye Google Fomu neGoogle Docs
NeGoogle Docs, zviri nyore kubatana nezvimwe zvishandiso zvakadai seGoogle Sheets uye Google Fomu. Kana iwe ukagadzira chishambadziro kana chati muGoogle Sheets, iwe unogona kuisa iyo ruzivo zvakananga muGoogle Docs.
Nemafomu eGoogle, unogona kugadzira kuongororwa dzinochengeterwa pachako kuGoogle Drive kuti uwane nyore kuwana uye kuongorora kubva kuGoogle Docs
Google Sheetsiti Iyi sarudzo yakanaka kune chero munhu anofanirwa kuvaka chero rudzi rwetchati, rondedzero, hurongwa, kana spreadsheet. Iyo yekuparadzira jenareta - yakafanana neExcel - uye ndeye mahara.
Paunenge uchinge wavhura Google Sheets uye gadzira chati yako, unogona kuiisa nyore nyore mugwaro rako.
Ita izvi nekukwira kumusoro kune mudziyo wekushandisa nekudzvanya Insert > chati > Kubva kuMashiti. Iwe unofanirwa kukwanisa kutarisa uye kusarudza chati yaunoda kuwedzera kune yako gwaro.
Google Forms inzira yakanaka yekuunganidza ruzivo uye mhinduro dzemhinduro. Ingoenda ku Google Fomu saiti uye tanga kugadzira yako fomu kana ongororo mune mamwe masekondi.
Iwe nechikwata chako munogona kubatana uye kusarudza template kubva kuGoogle gallery - kana kugadzira template yakasarudzika kubva kutanga kuita tsika kuti iko kuravira kwako.
Google Fomu zvakare yakasununguka kushandisa uye inogona kubatana ne software yakaita Asana uye HubSpot.
Pamusoro pezvo, ese ako eGoogle Mafomu magwaro nemhinduro zvinobva zvachengetwa kuGoogle Drayiri yako kuitira kuti iwe ugone kusvika ivo vachiri paGoogle Docs peji.
Kuti uite izvi, tinya pane icon yezvirongwa kana uchivhura Google Docs. Dhinha pasi kuti Forms kuti uwane fomu kana ongororo yaunoda kuvhura.
Imwe yekupedzisira yekucherechedza ndeyekuti vanhu vari kupindura fomu yako kana ongororo vanogona kuzviita pane chero mhando yemhando, vachiita Google Fomu senzira yakakodzera kune wese munhu.
Tanga neGoogle Docs
Makorokoto! Iwe ikozvino uri Google Docs pro. Kunyangwe iwe uri mushambadzi kana CEO, aya matipi anokubvumidza iwe kutora mukana weGoogle software uye ugadzire zvinyorwa zvinoshamisa zve chero mhando, zvisinei neako nyanzvi yekumashure.
Google Docs inokupa iwe kugona kugovera basa rako nevanhu vazhinji sezvaunoda, chero nguva yaunoda, ichiigadzira chishandiso chikuru chezvikwata zvinoshanda. Izvo zvino chengetedza hupenyu hwako zviri nyore nekuchengetedza zvoga shanduko kune yako gwaro kune Cloud ... zvichireva kuti pasisina kushushikana nezve kurasikirwa nebasa rako. Chekupedzisira, unogona kushanda pamagwaro ako kubva kupi zvako - kungave kana kusaina iwe internet.
Nezvinhu zvese izvi, unogona kuona nei vanhu vazhinji vakasvetukira paGoogle Docs bandwagon. Uyezve, ndezvemahara! Nei usingayedze?
Heano ese eGoogle AR mhuka iwe aunoona mu 3D
Makumi maviri neshanu Zvakanakisa Muvaki Zvishandiso zve25
14 Google Docs inobatsira munhu wose kuti azive 2017
Maitiro Ekuisa Iyo PDF muPowerPoint
Google Home matipi uye mazano: Tapa yako Mini, Max, Hub uye Hub Max
Best free Android apps ye2017: 100 unofanira kutora
12 Inobatsira Microsoft Word Mazano uye Tricks
Nzira Yokutanga A Premium WordPress Blog (Step-by-Step Guide)
10 Yakanakisa Google Doc Wedzera-ons Kuti Ugadzire Anoshamisa Magwaro
Iwo 18 Akanakisa Ekutungamira Zera Mapulagi ekuwedzera kune Yako WordPress Siti